Waan qeerroon Goobbaa irra oolan quba qabduu?Qeerroon Goobbaa yeroo ammaa lafa raasaa jira – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWaan qeerroon Goobbaa irra oolan quba qabduu?Qeerroon Goobbaa yeroo ammaa lafa raasaa jira
Waan qeerroon Goobbaa irra oolan quba qabduu?Qeerroon Goobbaa yeroo ammaa lafa raasaa jira
Waan qeerroon Goobbaa irra oolan quba qabduu?
Qeerroon Goobbaa yeroo ammaa lafa raasaa jira
Aangawoonni OPDO ittigaafatamummaa fudhachuu yoomuma bartu? Badii qaqqabaa jiru hunda ‘diinatu kana hojjetaa jira’ jechuu dhiiftanii rakkinoota mudataa jiran adda baasuudhaan ‘inni kun dogongora keenya, akkasiin sirreessuuf teenya,’ ‘inni kun immoo dogongora abaluuti, inni immoo karaa kana sirrata’ jettanii ittigaafatamummaa fudhachuu yoom bartu?
Waan hunda caalaa dubbii #Aadde_Adaanech keessaa kan nadhibe, ‘[warri rakkoo Goobbaa fi bakkeewwan biraa uumaa jiran] MNO Oromiyaallee bulchuu hindandeenye akka jedhamuuf’ kana gochaa jiru jechuu isheeti. Akka mootummaatti MNO, akka paartiitti immoo OPDOn yeroo ammaa kana Oromiyaa bulchuu akka dadhabaa jiru waan ifa ba’e ta’ee utuma jiruu diinni akkasitti akka hubatamnu fedha jechuun kun maali? Lammiileen nagaan ba’anii galuu erga dadhabanii biyya bulchuu dadhabuun kana caalaa maali? Erga gurmuun ammaa kun aangoo qabatee waggaa lama keessatti weerara daangaa dhaabaisuu erga hindandeenyee biyya bulchuu dadhabuun kanaa oli maali? Caasaan MNO lammiilee waliin mari’atee dubbii sirreessuu utuma danda’uu loltuu bobbaasee halkanii fi guyyaa jiraattota nagaa tumsiisuu, ajjeesuutti deebi’uu caalaa biyya bulchuu dadhabuu wanti jedhamu maaluma? Rakkoo nageenyaa Oromiyaa mudataa jiruuf ittigaafatamummaa sadarkaa duraa kan qabu MNO isa utuu aangoo mootummaa of harkaa qabuu biyya bulchuu dadhabe malee ‘diinota’ OPDOn halkanii fi guyyaa himattu san miti. Ittigaafatamummaa fudhachuu baraa, ittigaafatamummaa fudhachuun jabina malee laafina miti, qaroomina malee duubatti-haftummaa mti.
Gimbiin kana fakkaatti yeroo ammaa.kuni bu’aa dammaramuuti
Shira WBO fi Qeerroo Maqaa Xureessuu OPDO Horroo Guduruu Wallaggaa.
“Horro Guduruu magaalaa shaambuutti hooggantoonni godinichaa shira jibbisiiaa qindeessuun dhaga’ame.
Godinichatti hoggontoonni waajjira dhaaba OPDO, waajjira nageenyaa, waajjira poolisii godichaa fi, bulchiinsi magaalaa godinichaa shira maqaa ABO/WBO xureessuuf hojjechaa jiraachuun bira ga’ame jira.
1. Aanaa Amuruutti miseensa poolisii tokko faana waliigaluun “mana jireenyaakee geessiitii kilaashiikee kaa’i ba’i nutimmoo erginee fuusifnaa “ jechuudhaan erga dubbii fixanii booda poolisii kora bittinneessaa afur (4) halkan itti eeguun haadha mana poolisichaa waamsisanii nuti WBO dha qawwees birriis fidi jedhanii doorsisuun qawwee fuudhanii deeman. Garuu holola WBOn uummata saamaa jira jedhu qopheessaa akka jiraniifi aanichatti namoota holola kana oofan dargaggoota keessaa ijaarachaa jirachuu namni achuma waajjira nageenyaa keessaa icciiti kana quuqama sabummaaf qaburraa ka’uun heeruu nuuf kennee jira.
2. Achuma godina kana jala kan jiru magaalaa Kombolchaattis poolisoota kora bittinneessaa magaalaa Fincaa’aa buufatanii jiran keessaa namoota jaa(6) qindeessuun milishaa gandaa tokko doorsisanii kilaashiikees qabeenyaa callaa qabdu hundaa fidi nuti WBOdha jedhanii qawwee irraa fuudhanii deemani. Shira qooheessan kanaan WBO maqaa yakkuuf kaadirootaaf jala adeemtote hedduu qopheesaa jiraachuun isaanii bira ga’ame jira.
3. Godinichuma magaalaa Shaambuu keessatti maqaa “Qeerroo” jedhuun daldaluun dargaggoota bakka hedduutti erga addaan ciranii booda amma qeerroon godinichaa bakka lamatti wall hiruun waldura dhaabbannaa guddaa gochaa jira. Kana qofa mitii dargoggaata barbaacha faayidaa qaban keessaa filuun bulchiinsi magaalaa dhoksaadhaan ijaaruun kan qeerroowwaan gartuu lamaan sun hin beekne saamichaafi doorsisa namoota dhuunfaa irratti taasisee WBO tu sin saamaafi sin doorsisaa jira jechuuf qophii akka xummuran qaamuma sana keessaa kanneen qooda fudhatan saaxilanii jiru.
Kanaaf qeerroo, qarree f hawwasni godinichaa martuu dammaqinsaan shira kunneen ofirraa eeguufi qabsoo eegalame milkeessuuf akka hojjettan Qeerroon Bilisummaa Oromoo magaalichaa dhaamsasaa dabarsee jira.